Iintsana zikhula ngokukhawuleza, kwaye ngokuthe rhoqo ukuthengwa kwefenitshala yokuqala kuyimfuneko ekuzalweni komntwana, kwaye abazali banokugqiba ekubeni banqobe ummandla omtsha emva kwexesha elithile. Emva kwakho konke, abantwana bavame ukukhetha yonke into enomfanekiso wabalingani babo abathandayo, kunye nokuhlaselwa komculi osemtsha kunye neepenti eziziveleleyo, awukwazi ukuqinisekisa ifenitshala. Kodwa enyanisweni, kubalulekile ukuba ufunde umntwana ukuba enze umyalelo. Yingakho umgangatho ophakamileyo, kodwa ungathengi, ifenitshala yeplastiki ngoku ihlonishwa kakhulu ngabazali. Ngokukodwa, isifuba seplastiki sabadwebi beemathoyilo yinto ekhethekileyo kwifenitshala eyenziwe ngamaplanga: ayithengi, ayisebenzisekanga kwaye umntwana unemibala eqaqambileyo kunye nethuba lokuzihlobisa yena uya kuthanda.
Amabhobho ePlastiki yokugcina amathoyizi
Iifomati zePlastiki zihlala zikopisha ifenitshala yeenkuni , ngoko kuya kuba neengxaki ngeendlela ezahlukeneyo. Abazali bavame ukukhetha kwiintlobo ezintathu eziphambili:
izifuba zeplastiki kunye nabakhonkco beetayiti yezona zinto ziqhelekileyo kunye nezincinci (azifani kakhulu "nabantu abadala", inzuzo enkulu yeeplastiki zabathengi kunye namathoyizi ithuba lokufihla zonke izinto ezincinci kwaye ngaloo ndlela ufunde umntwana ukuba afune indawo kuyo yonke into);
kukho ukuhlukahluka kwesifuba sezingane zeplastiki ngendlela yesibhobho sokudlala (isiqulatho se-lid e-hinged can be served as table table, ngezinye amaxesha imizekelo enjalo idibeneyo kwiithalafu kunye nodonga oluncinci lufumaneka ngohlobo lweedeski);
kwaye ekugqibeleni, imizekelo enomdla kakhulu kubantwana beeplastiki zokugcina amathoyizi-uhlobo oluvulekileyo (apha udibaniso lwamacandelo amancinci amancinane kunye neebhokisi ezincinci njengeibhokisi eziphezulu, ifenitshala enjalo ithandwa kwiNtshona, ngoko ke intengo yayo ngumyalelo wokuphakama ophezulu).
Ngokwesiko, umgcini wezingane zeplastiki ezenzelwe amathoyizi enemibala eqaqambileyo eneemifanekiso ezininzi. Esikhundleni seempempe kaninzi zisebenzisa izibalo ngendlela yemigobolondo, imoto okanye iintyatyambo. Iimodeli ezimnandi zeeplastiki ezingapheliyo zingekho ngaphantsi kwalabo be-chipboard, kuphela ziyakucoca ngaphandle kokwesaba kwaye zihlale zihlambulukile.
Setha i Sihlalo
Ukulungiswa kwezandla zepekethi
Iibhodi zangaphambili zokulungiswa kwangaphandle kwendlu
Iileyili zeekerikhi zeekhikhiti
Ukupakisha umhlobiso kwi-corridor
Ukufakelwa kwelayili kwindawo yokuhlamba
Izitayela zezindlu nezindlu
Ukuchonga ngesondo somntwana kwikhalenda yeTshayina
Izicathulo ezitratshi - iifoto eziyi-144 zezicathulo zabasetyhini kwaye zikhululekile kuzo zonke izihlandlo
Indlela yokufundisa umntwana ukuba athathe iminyaka emithathu?
Nini ukwenza i-ultrasound ye-gland glands?
Iibhotsana Zabantwana Zomthombo Wabafana
Kutheni umntwana ehogela i-acetone emlonyeni wakhe?
IWrist Watch Watch
I-Bacteriophages - Iinjlobo kunye nenjongo
Ukhuphe ngezandla zakho
Usuku lwaBalalaika lwaMazwe ngamazwe
Yintoni ebonakala ngathi iparadesi?
Unokubamba njani ukushisa komntwana iminyaka eyi-11?
Yintoni enxiba ngayo ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka?
UGeorge Clooney kunye nomfazi wakhe u-Amal nomkhwekazi uBaria wavakashela i-premiere ye "Suburbicon" eLos Angeles
Iibhotile zemizuzu emibini yeentombazana
I-lazy belyashi - zokupheka okukhawulezileyo kunye ezilula kakhulu kwisitya sakho ozithandayo
Ikhofi kunye ne-ayisikrimu - iindlela zokupheka ezona zizonwa kakhulu eziphuza ezitshisayo nezibandayo
Indonga Indodakazi yaseSweden uVictoria okwesibini yaba ngumama
Ukugubungela okuMhlophe kwisini